लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउन : ओली सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिने ! – Life Nepali
लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउन : ओली सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिने !
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमीवाट सेना हटाउन नेकपाको सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपालको अतिक्रमित भूमि लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउन सरकारलाई साथ दिने बताएको हो । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको २१ महिना पुगेको अवसरमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसको साथ र समर्थन रहने जनाएको छ ।
अहिले सरकारलाई शतप्रतिशत साथ र समर्थन रहेको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस समर्थनलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकको सार्वभौम र स्वाभिमान रक्षाका लागि सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बोलेर मात्र होइन आफ्नो भनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसको साथ रहेको स्पष्ट पारे । यसअघि मुलुक युद्ध र संक्रमणकालबाट गुज्रिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र सबैको साथ र समर्थन रहेकाले सरकार भारतीय सेना हटाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सबैले साथ र सहयोग गर्ने भन्दै उनले यस अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले ओली सरकारको २१ महिन अवधिमा २१ बुँदे असफलता पनि सार्वजनिक गरेको छ । सरकार राष्ट्रियता र स्वाभिमान रक्षामा चुकेकोदेखि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको सरकारको २१ बुँदे असफलतामा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।-रासस
Previous निर्वाचनको मुखमा : कम्बल बाँडेको भन्दै नेकपा वडाध्यक्षवि’रुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी
Next प्रधानमन्त्री ओली १० कामचोर मन्त्री फाल्दै : यी हुदै छन् नयाँ मन्त्री !
30 mins ago kamal